Thwebula Ibhola Lebhola Nge-Electronic Arts Apk Version Yakamuva Game For Amadivaysi Android
ukwakha ithimba lakho lokugcina ne-ronaldo njengenkanyezi! uhlelo, udlale futhi uwine!
Thwebula Apk (69.70 MB)
qala ukwakha ithimba lakho lokugcina ne-ronaldo njengenkanyezi!
i-fifa mobile iye yacatshangelwa ukukuletha umdlalo webhola webhola lezinyawo eliyiqiniso futhi elithakazelisayo ozoke ulizwe!
amaphuzu ibhonasi cristiano ronaldo into ukuqala ukwakha nokuphatha ithimba lakho lokugcina.
ukuqeqesha noma yimuphi umdlali esimweni sezinkanyezi, ukuhlasela abaphikisi, nokuqhubeka nokubuyela kokuqukethwe kwansuku zonke isikhathi sonke isikhathi.
futhi, ngena emdlalweni lapho uhamba nosayizi wokulanda we-100 mb.
kungakhathaliseki ukuthi ungumlindi we-savvy noma uqala ukuphuma, i-fifa mobile iyinhloko yakho yebhola. Yakha ithimba lakho eliphephile ™ ukuthuthukisa iqembu elincintisana kakhulu uma ukhetha noma yibaphi abadlali abangu-11 abavela kumaqembu angempela angaphezu kuka-550, kufaka phakathi izinkanyezi ezidlule
beka, bese ubaqeqesha ama-ovr angaphezu kuka-100.
engeza ukujula ku-roster yakho, lawula ukuhlela kwakho ngendiza, futhi masinyane tactics ngokushesha ngaphambi komdlalo.
yenza izingcingo ezifanele futhi ubuke iqembu lakho libe yiqembu eliphelile.
ukuhlaselwa ukuze uhlanganyele emidlalweni evusa amadlingozi okukunika izinto zakho ezihlaselayo ngemodi yokuhlasela.
leveli yokuncintisana entsha ikhipha umdlalo wakho ibe yizikhali eziphezulu ngenkathi uzama ukulawula ukufana kwamasekhondi angu-90, ukukhuphuka amabhodi wabaphambili, futhi uzuze umvuzo wonyaka unyaka wonke.
qhubeka ne-real-world eventstay exhunywe kwibhola lebhola langempela lomhlaba njengoba kwenzeka emhlabeni wonke.
hlola amakhono akho kumodi yomkhankaso womdlali oyedwa, bese uzishaya inselele ngemicimbi ehambisana ngqo lapho ungathola khona imiklomelo engavamile. Hlanganisa i-liague futhi unqobe isipiliyoni esibucayi sezenhlalakahle esikuvumela ukuba ujoyine amabutho futhi ulwela inkazimulo nabangani nabadlali abazungezile
hlola amakhono akho kumqhudelwano we-inter-league, noma uthathe amageyimu angcono kakhulu emhlabeni jikelele e-ligi vs. tournaments yezemidlalo ukugibela amabhodi wabaphambili bese ubonisa ithalenta lakho emgqeni.
Ukwakhiwa kwamagosa ezinselele ezinselele ezingozini ezishaya amasonto onke, izinselele zokwakha izigcawu zikuvumela ukuthi uhlele ngokusemthethweni imigqa ehlukene ukuze uthole imivuzo emangalisayo nenenjongo eqenjini lakho lokugcina.
uthathe isinyathelo esisodwa futhi uphathe lezi zigcawu ezithintekayo ngokuhlasela i-tournaments yonke impelasonto isikhathi eside nemali emihle kakhulu.kulo lokusebenza: kudinga uxhumano lwe-intanethi oluqhubekayo (izimali zenethiwekhi zingasebenza).
idinga ukwamukelwa kwe-privacy's kanye ne-cookie inqubomgomo kanye nesivumelwano somsebenzisi.
kufaka ukukhangisa kwe-in-game.
liqukethe izixhumanisi eziqondile kwi-intanethi nakwezingosi zokuxhumana nabantu ezihloselwe izilaleli ezingaphezu kuka-13. Uhlelo lokusebenza lusebenzisa amasevisi wegeyimu ye-Google Play play.
phuma amasevisi wegeyimu we-Google ukudlala ngaphambi kokufaka uma ungafuni ukwabelana ngokudlala kwakho ngegeyimu isivumelwano se-friends.user: http: //terms.ea.cominqubomgomo yemfihlo kanye nekhukhi: ubumfihlo.ea.com/envisit http: //
help.ea.com/en/# ukuze uthole usizo noma imibuzo.Umama angasetha umhlalaphansi ku-intanethi ngemva kokuphawula kwezinsuku ezingu-30 ku-ea.com/service-updates.
ibhola lebhola lezemidlalo 2018
fifa 16 ibhola
imicimbi yezemidlalo ehlobo
isiteleka sebhola - ibhola lebhola yabadlali abaningi
8 ibhuloho ibhola
I-golf ye-golf mini - umdlali wabadlali abaningi
ilungu lebhola lebhola lezwe
inselelo ye-hockey yomoya
i-basketball shoot 3d
Kwaba Ngumsebenzi Wokuvula I-Pack Ye-19 Nge-Tapsoft
impi yekhilikithi yomhlaba - abadlali abaningi kanye nomsebenzi wami